Ụbọchị My Pet » 6 Mkpa ndị na-eche Banyere N'oge Mmekọahụ
emelitere ikpeazụ: Jul. 15 2020 | 2 min agụ
Gịnị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere n'oge mmekọahụ? Nke a bụ otu ajụjụ na-eleghị anya e na-emekpa ndị inyom kemgbe oge Adam na Iv. Ọtụtụ narị afọ agafewo, ma ka na-ole na ole ndị inyom nwere ike obi ike na-ekwu na ha maara kpọmkwem ihe ha na onye òtù ọlụlụ na-eche banyere mgbe na-enwe mmekọahụ. Nneme n'okpuru explores ụfọdụ echiche nke pụrụ ogide a nwoke uche n'oge mmekọahụ.
Olileanya m na-adịghị ejaculate nká
Ịrụ ọrụ nchegbu n'oge mmekọahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka nwoke ọ bụla nwere nwere mgbe na-enwe mmekọahụ. N'ihi ihe ụfọdụ, ọ bụ a mgbe nile ihe, mgbe maka ndị ọzọ, ọ na-eme nanị na ụfọdụ n'oge ụfọdụ kpọmkwem dị ka mgbe na-enwe mmekọahụ mgbe a ogologo oge, na-mma na ọhụrụ na onye òtù ọlụlụ, wdg. Ịrụ ọrụ nchegbu bụ karịsịa nkịtị n'etiti ndị na akụkọ ihe mere eme nke na akaghi aka ejaculation.
M Kwesịrị ákwá dị ka nke a, ma ọ bụ na ọ bụ n'ezie ọjọọ?
Ịkwa ákwá bụ akụkụ nke ọ bụla mmekọahụ eme. Ụmụ okorobịa na-adịghị mgbe nnọọ obi ike banyere otú ha ákwá. Mgbe inwe mmekọahụ, ha na-emekarị ejedebe na-eme ọtụtụ mgbalị iji zuru okè ha kwaa akwa ariri. Nke a bụ n'ihi na ha na-atụ egwu na a ọjọọ kwaa akwa ariri wee gbanwee ha na onye òtù ọlụlụ anya. Ya mere, ma ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ onye òtù ọlụlụ na-ịkwa ákwá dị iche iche dị iche iche mgbe n'oge mmekọahụ, nwere ike ọ gaghị na-eke na ike dị nnọọ ịbụ ihe na mmetụta nke mgbalị ọ na-eme ka ya zuo okè moans.
Ndi enye amasị ya? Mgbe ahụ ihe mere o ji dị otú ahụ nkịtị?
Nke a echiche bụkwa a byproduct nke arụmọrụ nchegbu na ndị mmadụ nwere n'oge mmekọahụ. The ajụjụ ahụ na-ewute ndị ikom dị ka inyom na-abụ ihe olu karịa mmadụ mgbe na-enwe mmekọahụ; Otú ọ dị, wezụga bụ mgbe e.
Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ndị inyom na-aga nkịtị dị n'ihi na ha na-adịghị amasị ihe ha na onye òtù ọlụlụ na-eme. Otú ọ dị, na nke ahụ bụ mgbe ọ bụghị ikpe. Ụfọdụ na ọnụnọ jụụ dị n'ihi na ha na-ahọrọ na-anọ jụụ.
M kwesịrị ịgwa unyi?
Ụfọdụ ndị ikom na-ekwu ruru unyi nanị n'ihi na ọ na-abịa ndammana ha, mgbe e nwere ndị ọzọ bụ ndị na-na dị nnọọ ka ha na onye òtù ọlụlụ na. Otú ọ dị, e nwere ihe na-ndutịme ke uche ha banyere otú ha na onye òtù ọlụlụ na-enwe mmasị ịnụ okwu dị otú ahụ n'oge mmekọahụ; a na-eme na-akasị mgbe ndị ikom na-enwe mmekọrịta ọhụrụ.
Oh! Nke ahụ dabara nke ọma
Okwu a bụ a nkịtị otu maka ndị mmadụ ndị dị nnọọ hụrụ a zuru okè ụzọ ara ma ọ bụ butts. A nwoke nwere ike iche na otú ahụ mgbe o na-amalite na-anụ ụtọ ihe kasị. A nwoke n'uche pụkwara ịmalite gwaghị “oh, nke ahụ dabara nke ọma” mgbe na-agba àmà ihe Wezuga sexy omume site ibe ya.
Eche echiche banyere ndị inyom ndị ọzọ
Ọtụtụ ndị inyom ga-ahụ na nke a-awụ akpata oyi, ma mgbe ndị na-eche banyere ndị inyom ndị ọzọ na-enwe mmekọahụ mgbe. Nke a na-eme mgbe mmekọahụ na-aghọ jijiji mgbe anọ na a mmekọrịta n'ihi na afọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji hụ na gị na onye òtù ọlụlụ na-adịghị eche banyere ndị inyom ndị ọzọ na-enwe mmekọahụ mgbe, ime ihe iji ose elu mmekọrịta gị.
Ndị a bụ ndị dị nnọọ ole na ole ihe na nwoke nwere ike na-eche n'oge mmekọahụ. E nwere ike ịbụ ihe weird echiche na-eru na a nwoke n'uche mgbe na-enwe mmekọahụ na-adabere na ọnọdụ ọ nọ.